I-Veto yiNgxenye ebalulekileyo ye 'Checks and Balances'
UMgaqo-siseko wase-United States unika uMongameli we-United States amandla okuphela okuthi veto-athi "Hayi" -iindleko ezidlulileyo zindlu zombini zeCongress . Isibhengezo esivumelekile singasakuba ngumthetho ukuba iCongress iphakanyise isenzo sikaMongameli ngokufumana ivoti engaphezu kweyesibini yamalungu eNtlu (amavoti angama-290) kunye ne-Senate (amavoti angama-67).
Nangona uMgaqo-siseko ungenayo ibinzana elithi "umongameli we-veto," iCandelo I lifuna ukuba yonke ibhilikhwe, umyalelo, isisombululo okanye esinye isenzo somthetho esadluliselwa yiCongress kufuneka sinikezwe kumongameli ukuze avunywe kwaye asayine ngaphambi kokuba ibe ngumthetho .
I-veto kamongameli ibonisa ngokucacileyo umsebenzi weenkqubo " zokuhlola kunye nezilinganiso " ezenzelwe urhulumente wase - US ngabaBawo boBantu bokuQala . Ngoxa umongameli, njengenhloko yegatsha elilawulayo , unokuthi "hlola" kumandla webebe yomthetho ngokubhengeza iindleko ezigqitywe yiCongress, isebe elisezomthetho lingakwazi "ukulinganisela" loo magunya ngokugqithisa i-veto kaMongameli.
I-veto yokuqala yongameli yenzeke ngo-Ephreli 5, ngo-1792, xa uMongameli uGeorge Washington evotela umrhumo olwabiwo oluya kukwandisa ubulungu beNdlu ngokubonelela abamele abongezelelweyo kwiindawo ezithile. Impumelelo yokuqala yenkomfa ye-veto kamongameli yenzeke ngo-Matshi 3, 1845, xa iCongress ithintela uMongameli uJohn Tyler nge- veto yenkokhelo yokuchitha imali.
Ngokomlando, iCongress iphumelela ngaphezu kwe-veto yomongameli ngaphantsi kwama-7% emigudu yayo. Ngokomzekelo, kwiimvavanyo zayo ezingama-36 zokunyusa ama-vetoes akhutshwe nguMongameli uGeorge W. Bush , iCongress yaphumelela kanye kuphela.
Xa ibhaso-mali idluliselwa yiNdlu kunye neSeti , ithunyelwa kwideskiti likaMongameli ukuze asayine. Zonke iindleko kunye nezigqibo ezidibeneyo, ngaphandle kwalezo ziphakamisa izilungiso kuMgaqo-siseko, kufuneka zisayinwe ngumongameli ngaphambi kokuba zibe ngumthetho. Izilungiso kuMgaqo-siseko, ezifuna ivoti ezimbini zokuvunywa kwindibano nganye, zithunyelwa ngqo kwilizwe ukwenzela ukuqinisekiswa.
Xa kunikezwe ngumthetho ogqitywa yizindlu zombini zeNgqungquthela, umongameli ufunwa ngokomgaqo-siseko ukuba asebenze ngenye yeendlela ezine: usayine kumthetho kwixesha eli-10 elimiselwe kuMgaqo-siseko, ukukhupha i-veto rhoqo, vumela ukuba ibhilikithi ibe umthetho ngaphandle kokusayinwa okanye ukukhupha i-"pocket" veto.
Xa iCongress iseshoni, umongameli angasebenzisa i-veto ngokuphindaphindiweyo kwi-Congress ye-Congress evela kwindlu yesigqeba esivela kuyo kunye nomyalezo we- veto ochaza izizathu zakhe zokwenqaba. Okwangoku, umongameli kufuneka avotele i-bill ngokubanzi. Akunakulungiseleli izibonelelo zabanye bhilile ngelixa bevuma abanye. Ukulahla amalungiselelo ngamnye kwilwayo-mali kuthiwa yi-" veto-item veto ." Ngo-1996, iCongress yadlulisela umthetho wanika uMongameli uClinton amandla okukhupha i -vetoes-line item item , kuphela ukuba iNkundla ePhakamileyo ivakalise ukuba ayihambisani nomthetho ngo-1998.
UMthetho oYilwayo uba ngumthetho ngaphandle kokuba usayinwe nguMongameli
Xa iCongress ingasetyenziswanga, kwaye umongameli akahluleki ukuba angayibhalisi okanye i-veto ibhajethi ethunyelwe kuye ekupheleni kweentsuku ezili-10, kuba ngumthetho ngaphandle kokutyikitywa kwakhe.
I Pocket Veto
Xa iCongress igqityiwe, umongameli angayinqabela ibhajethi ngokukhanyela ukusayina.
Esi senzo siyaziwa ngokuba yi "pocket veto," esivela kwisifaniso somongameli nje ngokubeka ibhilikhi ephaketheni lakhe nokulibala. Ngokungafani ne-veto rhoqo, iCongress ayinawo ithuba okanye igunya lomgaqo-siseko lokugqithisa i-veto ye-pocket.
Indlela iNkomfa iphendula ngayo iVeto
Xa uMongameli abuyisela ibhilikhwe ekamelweni leNgqungquthela elalivela kulo, kunye nesichaso sakhe ngesimo somyalezo we- veto , eloo gumbi lifuneka ngokomgaqo-siseko ukuba "liqwalasele" ibhili-mali. Umgaqo-siseko awuthuli, nangona kunjalo, ngentsingiselo "yokuqwalasela kwakhona." Ngokwe-Congressional Research Service, inkqubo kunye nesithethe zilawula unyango lwee-bills. "Emva kokufumana i-bill ye-vetoed, umyalezo we-veto kaMongameli ufundwa kwirejista yendlu yokwamkela. Emva kokungena umyalezo kwijenari, iNdlu yabaBameli okanye iNational Senate iyavumelana nemfuneko yomgaqo-siseko ukuba 'iqwalasele' ngokubeka umlinganiselo kwitheyibhile (ngokumisela ukuyeka inyathelo elongezelelweyo kulo), ukubhekisela kwinqununu kwikomiti, ukuhlehliswa ngokuxutyushwa kwimihla ethile, okanye ukuvota ngokukhawuleza ngokuqwalasela kwakhona (ukuvota ngaphezulu). "
Isenzo seNdlu kunye neSenate kufuneka ukuba yongamele i-veto kamongameli. Iibini zantathu, ukuvota okuphezulu kwamaLungu okukhoyo kufuneka ukuba angaphezulu kwe-veto kamongameli. Ukuba indlu enye ihluleka ukugqithisa i-veto, enye indlu ayizami ukunqoba, nokuba ngaba iivoti zikhoyo ukuba ziphumelele. INdlu kunye neNkundla yeSeti ingazama ukunqoba i-veto nanini na ngexesha leCongress apho kukhutshwa i-veto. Ukuba zombini izindlu zeCongress zivota ngokuphumelelayo ukuba zongamele i-veto kamongameli, ibhilikhwe iba ngumthetho. Ngokwe-Congressional Research Service, ukususela ngo-1789 ukuya ku-2004, kuphela i-106 ye-1,484 ye-vetoe kamongameli yanyanzeliswa yiCongress.
AbaPhathiswa babedla ngokubanzi okanye besongela iCongress nge-veto ukwenzela ukuba bachaphazele umxholo wesikhokhelo okanye bawuthintele ukuhamba kwayo. Ukwandisa, i-"veto sengongelo" sele ibe yinto eqhelekileyo yezopolitiko bobuongameli kwaye ihlala isebenza kakuhle ekubunzeni umgaqo-nkqubo we-US. Abaongameli basebenzisa i-veto engozini ukuze banqande iCongress ekutshatyalaliseni ixesha kunye nokuxoxwa kweebhilikhwe bazimisele ukuvota phantsi kweemeko.
Iingcebiso ezili-10 zokukugcina ukhuselekile ngelixa u-Rock ukunyuka
I-Pebble Beach Golf Links: Izithombe kunye neenyaniso ozifunayo
"Mein Herr Marquis, e-Mann wie Sie" Iingoma kunye neNguqulelo
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: Innamorarsi
I-Dongzhi - Winter Solstice
Amagama aseSpeyin 'eKhaya'